🥇 ▷ Diiwaangashan oo la sharciyeeyay laba taleefanno cusub oo LG ah ✅
Diiwaangashan oo la sharciyeeyay laba taleefanno cusub oo LG ah
Isku laabashada taleefannada gacanta Iyagu waa kuwa moodada ah isla markaana goor dhaw waxay noqon doonaan kuwa caadiga ah ee buugga macluumaadka. Hadda, Thanks to the LetsGoDigital dhexdhexaad ah waxaan ognahay in LG uu durbaba ka shaqeynayo fikradaha cusub ee taleefanka gacanta ee LG ee la qaadan karo. Maalmo yar ka hor waxaan dhahnay in LG uu ku shaqeynayay taleefan cusub oo leh seddex shaashad isla markaana hadda dhexdhexaadka laga soo xigtay wuxuu muujiyey laba taleefan oo cusub oo ay ku xiran yihiin astaanta iyo iibinta.
Laba milkiileyaal LG ah Waxaa la daabacay maalmihii la soo dhaafay waxayna muujinayaan laba nooc oo cusub oo kamarad isku laabma ah oo leh seddexjibbaarayaal saddex geesood ah. LG wuxuu ku soo bandhigay moobiilka moobiilka cusub taleefan cusub oo leh “dillaac” iyo shaashad meesha laga saari karo laakiin hadda waxay ku shaqeyn doontaa taleefannadeeda ugu horreeya ee laalaablaabi karo.
LG taleefanno isku laabma
Sida laga soo aruuriyay dhexdhexaadinta aan kor ku soo sheegnay, rukhsadihii waxaa soo gudbiyay Febraayo 21, 2019 LG Electronics oo ku yaal xafiiska Shiinaha iyo kireeyaha, CNIPA. Hadda, Ogosto 9, maalmo yar ka hor, rukhsadihii waxaa lagu daabacay keydka Xogta Hantida Maskaxda ee Adduunka waxayna shirkadda siinayaan xuquuqaha ku saabsan qaababkan moobaylka ee ay ku shaqeyn karaan.
Waxaa jira laba taleefanno gacmeed oo LG laabma. Ta hore waxay ina xasuusinaysaa Samsung Galaxy laab waana shaashad laab iyo dabacsanaan ah oo ku jirta aaladda. Waxay sidoo kale u furi lahayd Samsung’s inkasta oo kiiskan shaashadda kore waa dhameystiran tahay oo ma jiraan badhanno iyo geesaha gebi ahaanba way yaryihiin iyadoon lahayn xarig ama kamarad soo bixin ama wax la mid ah. Intaa waxaa sii dheer, saddex dareemayaal oo kaamirada ah iyo Flash LED oo meel toosan la galiyay ayaa laga dareemi karaa dhabarka. Ma jiraan deked iskuxiran ama ku dallacsan ama cod-baahiye.
Marka laga hadlayo taleefanka labaad ee diiwaangashan, nashqadeysigiisa ayaa laabi lahaa. Shaashad buuxda oo aan xudduud lahayn markii la laalaabanna waxaan aragnaa in nidaamka kamarad ku yaal barbar dhinac ah. Saddex dareemayaal oo ay weheliyaan tooshka loogu talagalay.
Labada moodelba waa la diiwaangaliyay mana ogin garan mayno haddii LG uu dhawaan u rogi doono iyo laalaabbo taleefanno gacmeed cusub ama ay si fudud shirkaddu uga fikireyso fikradaha suurogalka ah mustaqbalka. Kiiska mobilada labaad wuxuu leeyahay muuqaal weyn muuqaalka Huawei Mate X waxayna umuuqataa naqshad macquul ah ama macquul ah. Xaaladda koowaad, ma aragno nooc nooc ah xiriiriye ama kaamirooyin hore sidaa darteed waa inaan sugnaa si aan u eegno bal inuu run yahay iyo sida wax loo qabto.